CAD, GIS, okanye zombini? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-CAD, i-GIS, okanye zombini?
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskcadastreGeospatial - GISGIS asiboniseMicrostation-Bentley
... ukuthengisa ubuchule oko kwenzayo Iprogram ye-Intanethi inzima kunokuba ikholise isigunyaziso ukuba enze isigwebo esilungisiweyo (ubuqhetseba) ngo oko akwenziyo software ebiza.
Kutshanje iBentley isungule iphulo lokukhuthaza iMephu ye-Bentley, isebenzisa njengengxoxo yokuba akukho mfuneko yokuba ucinge ngokwahlukeneyo ukuba zombini zinokuphathwa ngesixhobo esinye. Kule nto, amagqabantshintshi aliqela okuba sisondele kakhulu ekunciphiseni umsantsa kwaye siyeke ukusebenzisa amagama athi CAD / GIS ngokwahlukeneyo.
Kukho iingcamango ezahlukeneyo, ezinye zeengxaki zezoqoqosho, abanye ngenxa yezizathu ezikhethekileyo, abanye ngenkani, kodwa ekusebenziseni inkqubela phambili kwezobuchwepheshe, siyaqhubeka silwa nale ngxaki.
1. Ityala elisebenzayo. Kwenzeka ukuba ukuphumeza i-cadastre (ukusebenzisa umzekelo), ulwakhiwo lwe vector yemigca eyoluliweyo, esikiweyo, ejikelezayo, erhuqwayo, imifanekiso iyalayishwa, njl. ziyaqhubeka ukwenziwa kwi-AutoCAD okanye kwi-Microstation. Ukuba sibuza amagcisa ukuba kutheni ekhetha oko, baya kuthi:
I-ArcGIS ayisebenzisekanga loo nto
i-gvSIG inezixhobo kodwa isebenza ngokukhawuleza (kwi-Windows)
Imbonakalo ayibonakalwanga kwaye ayinayo izixhobo ezaneleyo
Imigca yokuhlela ilula kuneipolgoni
Inkxaso ye-IntelliCAD ayifani
Ngoko, kufuneka senze konke ukwakhiwa spaghetti, kumanqanaba, imibala, ubukhulu obufanelekileyo, emva koko uyigqithisele kwiArcGIS kwaye apho kwakhiwa iipoligoni. Xa sisenza oku sifumana iimpazamo zeengcinga (engaboni iCAD), Senza uhlengahlengiso kwaye sibuya senze utshintsho kwi-vector, ngomjikelo ophela kwiinkqubo ezinkulu uphela ngolunye usuku. Kodwa kwinkqubo yemihla ngemihla yokuhlaziya ngokusisigxina, ukutshintsha i-CAD kunye ne-GIS yinto enokuthi ekugqibeleni ibe yidatha engahambelaniyo.
Emva koko, ukuba sifuna ukwenza into eyongezelelekileyo, siyifaka kwisiseko sedatha (Ndiya kugxininisa, ngokomzekelo), ulungelelwaniso lwe-CAD, esilibona kwiindawo ezintathu zokugqibela kodwa ezinokuchaneka ngaphezulu kweendawo ezili-10 zedesimali, ngoku zinezinto ezintathu kuphela, ezinyanzela i vector ukuba ingaphinde ifane ncam, ukuba nje ayichaphazeli isantya yeenkqubo kwiziko ledatha. Apha uhlaziyo ngaphandle kweekhrayitheriya ze-topological lunzima ngakumbi.
Kwaye ngoqoqosho, umasipala omncinci funeka utyalomali isofthiwe ukwakha ii-vectors ezichanekileyo kunye enye yenza iimephu ezintle. Ukuba umasipala unyanzelwe okanye (kholelwa oko) ayifuni inkqubo yobunjineli yokusebenzisa ubuncinane i-AutoCAD Lite kunye ne-ArcGIS enye kunye nokwandiswa kwezimbini; Nangona kunjalo, ixabiso elingaphantsi, i-$ 4,000 (ngaphandle kokubandakanya uqeqesho). Abo basebenze noomasipala baya kuyazi ukuba kubiza malini ukuthengisa le mali kunondyebo olawula ngaphezulu kunoSodolophu.
Ndiyazi, kukho oomasipala abangenayo le miqobo, kodwa ubukhulu bomongo waseSpeyin ... uhlala enjalo ngenxa yezizathu zokufuna ukwenza i-GIS ne-CAD ngaphandle kokutshaya i-astral.
2. I-GIS kufuneka ibe nezakhono ze-CAD
Ndiyayiqonda ukuba xa ArcView 3x wayelapho akunakwenzeka ukuphumeza izixhobo topologies zolawulo ukwakhiwa kumda wesangqa, kodwa ngeli thuba andiyi ukuqonda isizathu sokuba sibe izixhobo kwi-GIS kuphela ukwenza oko CAD (izinto 30)
Iifayile ze-12 ezenza ukudala (imigca, i-arcs, iindidi, i-polylines, amaphuzu ...)
Iifayile ze-12 ukuhlela (ukufana, ikopi, ukuhamba, ukujikeleza, ukwandisa ...)
Ulawulo olusebenzayo lwe-snap (ukuxhomekeka kwam ukunyanzelisa, kunye ne-CAD)
Ngokuqinisekileyo sele benazo ezi zinto, kodwa siyakhalaza malunga nenkqubo. Kuya kufuneka zifane nendlela ezenziwa ngayo iinkqubo ezithandwayo, ngokulula kokuphatha izikhombisi, umgama, uququzelelo, ulwandiso, ukurhuqa, ukusika ... akukho nto i-astral, njengeAutoCAD okanye iMicrostation. Kule meko, eyona nto siyibonileyo ibiyinzame ye-gvSIG, ethe endaweni yokubuyisela indlela yokwenza iivenkile, iye yaqhelana nendlela ye yenze nge AutoCAD, kunye nezigidi zabasebenzisi kwihlabathi ezenza njalo (uyazi ukuba i-AutoCAD ineenkqubo ze-archaic). Kukho umsebenzi wokuvuthwa kwisantya sokusebenza xa ulayisha imifanekiso enzima okanye iifayile ezinkulu; Ndiqinisekile ukuba iqhuba ngcono kwiLinux, kodwa hayi kwiWindows, kunye nefayile ye- umngeni onzima ukuqinisekisa ihlabathi ukuba ivulekile ayiyikunciphisa.
3. Kukho i-CAD esele iyenzile i-GIS
Kwimeko yeMephu yeBentley kunye neMephu ye-AutoCAD, isikhundla ibikukudala amandla e-GIS kwizixhobo ezazisetyenziselwa ubunjineli. Inkqubela phambili ibalulekile, akukho mathandabuzo ngayo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku uninzi lwezinto ezenziwayo kunye nokupapasha ukusebenza (iimephu ezipeyintiweyo) zibuthathaka kwinto eyenziwa kakuhle yi-GIS (okanye ngcono). Ndiyakholelwa ukuba ukwenziwa kokufezekiswa kwemisebenzi elula kuhlala ... ukutsalwa kweenwele; ukuba akunjalo, masibone ukuba bangaphi abasebenzisi be-AutoCAD (izigidi) kwaye bangaphi (ngubani ongathanda) iMephu ye-AutoCAD (okanye i-3D Civil); ayizizo izizathu zexabiso, kuba uthelekiso lunokufana ukuba sikwenza nabasebenzisi abasebenzisa iilayisensi ngomphefumlo. Iziphatha phantse ngokufanayo neMicrostation kunye neMephu yeBentley, ngaphandle kokuya kupapasho kunye nokusebenzisana (nceda).
4. I-CAD ne-GIS zizihloko ezibini ezahlukeneyo.
Kukho isikhundla (esisezantsi) esichazela ukuba zombini izihloko ziinkalo ezimbini ezikhethekileyo kwaye akuyi kuba nako ukukwazi ukwenza zombini nge sixhobo esifanayo; inxalenye yaloo ndawo izuze iimbono zethu kwiminyaka embalwa edlulileyo:
... i-CAD yenze i-Vectors ecacileyo kunye ne-GIS yamaphupha amnandi.
Kodwa le elithile ezikuyo, kangangoko imigangatho ukuvuthwa kwaye eyabelwe yi software non-free, yalahleka ngqongqo, amaphulo afana OGC ecaleni GIS ke, ukuphunyezwa kombono ipolotiki, Ukusetyenziswa XML phambili ingqiqo BIM ngakwicala Cad, phakathi kwezinye izinto, baye benza CAD kungabonwa njengoko ibhodi umzobo kodwa inxalenye umsebenzi amakhono yokwenene (Architecture, Civil Engineering, ucando lomhlaba, njl).
Umkhwa uthi into ekhethekileyo ayizukubakho kwisoftware (CAD / GIS) kodwa kwindawo yesicelo. Ukwenza umzekelo, uyilo lweendlela kufuneka lube yinto ekhethekileyo yesoftware eyenza loo nto, ngokuchaneka kwe-CAD kunye nokukwazi ukuyisebenzela kwiinkqubo eziza kusebenzisa i-axis ukwenza imephu phantsi komxholo we-GIS. Kwangokunjalo, ifreyim yokumisa kufuneka iye ezantsi kwimbali kwaye idatha ye-GIS kufuneka ibe ngumzobo ocacileyo okanye owetafile yenyani enejometri yayo enokuhlelwa ukusuka kwicala le-GIS, ibuze iimpawu zayo, isazi unxibelelwano lwayo nolunye idatha; Ngelixa kwicala le-GIS imbonakalo yayo emangalisayo, edibanisa idatha kunye nokukwazi ukuhlela ngokuchaneka okwenziwa yi-CAD.
Kodwa ngenxa yoko ... sinyanisekile, kungekhona ngenxa yokuba ayikho sele zichazwe, izixhobo ezincinci sele zenza okuninzi, kodwa kufuneka uhambise iiprosoft software ezinkulu ukuzisebenzisa ngokufanelekileyo.
4. Njengoko ndiyibona
Ndicinga okwethutyana, siza kuqhubeka ukusebenzisa iinkqubo ezimbini ukumela ipropathi efanayo: ukuhlela i-vector yayo kwi-CAD, ukuyicazulula kwi-GIS, kunye nokuyiguqula kokubini. Ngokoluvo lwam, izinto ezininzi esizenzayo silayishe umsi omninzi kangangokuba uphulukene nokulula kokusetyenziswa kwawo ngeenjongo ezibonakalayo kunye nentengiso yetekhnoloji (ingxaki) isenze salityalwa sizathu sokwenza izinto zabantu (ukusombulula iingxaki).
Ibhodi yokuzoba ibinobuqaqawuli bayo, kuba akukho namnye owasungula enye indlela yokwenza imizobo ngesandla, irabha zombane zongezwa kolu luhlu, kodwa inkqubo yokwenza kwabo yayingekho kwimathiriyeli etafileni kodwa kwinto esiyenzileyo apho. Imizobo yeemephu yayisenza iimephu phantsi kwemigangatho yenkqubo yokulinganisa kunye nokubaluleka kwayo, sacinga malunga nokuyiprinta kodwa singaze sithandabuze ukusetyenziswa kwayo ngeenjongo zabantu.
Akufanele siphulukane nokuqonda, kuba ngoku itekhnoloji kufuneka yenze izinto zibe lula kuthi kwaye iphucule UKUSETYENZISWA KWAYO. Ke, kufanele ukuba kufike ixesha apho utyalomali luyeka malunga neefomathi, iiprosesa, iipixels, iilebheli kunye neempawu, ukutyala ixesha kwisizathu sokuba zenziwe: UKUSETYENZISWA KWABO. Ngenxa yoko, njengangaphambili, sizinikele ekuveliseni ishishini, ubutyebi kunye nezibonelelo zabantu.
Kodwa olu luvo luyinkohliso, kwaye ngokoluvo lwam, kule minyaka mihlanu izayo, uninzi lweeprojekthi zenqanaba eliphakanyiswe ekuqaleni, siza kuqhubeka nokwenza izinto ngokufanayo (yabona, masingagqibi ukuyenza kuGoogle Earth). Kwaye abavelisi besoftware beCAD / GIS:
Kwiphepha le-ESRI, mhlawumbi Masibone ukuphucula Ngomthamo wokwakha we-CAD, ndiyathemba ukuba akufanele ufanele usebenzise indlela yokusebenzisa ibhodi yokudweba kwakhona.
Kwicala le-AutoDesk, yazisa i-3D yoluntu ukwenza iMephu ijonge njengenxalenye yobunjineli. Umbono ubonakala ulungile kum.
Ngecala leBentley, khuthaza PowerMap ukwenzela ukuba i-CAD ephantsi ebiza i-GIS inamandla, kwaye mhlawumbi iququzelele ukuphunyezwa kwe-smoothing.
Kwicala lesoftware elinexabiso eliphantsi: Manifold, Tatuk GIS, Global Mapper, IntelliCAD, ukufumana umhlaba ngokwenza igama lesoftware elingenzi gama.
Ukuba uMthombo ovulekileyo (uzinzileyo) usetyenziso oluwela unqamlezo, ngokuqinisekileyo siya kukhangela emva koko, kungekhona kuphela yezoqoqosho (esele sibone), kodwa isisombululo seengxaki eziqhelekileyo (esele senzayo) kunye nokuthengisa kwamanye amazwe kunobundlobongela kunokuba ubuqhetseba.
Ukuphelelwa lithemba, mhlawumbi; ukukhohlisa, ngokuqinisekileyo. Wena: uyibona njani?
I-Euroatlas: imephu endala kwifom ye-shp
Yintoni eyenzekayo kukuba ulungelelwaniso lwesaveyi yakho, i-UTM, iyafana nezo zinokubakho kwiindawo ezingama-60 ze-UTM emhlabeni, ke kuya kufuneka uchaze ukuba yeyiphi na okuyo. Kwakhona, i-Datum yi-ellipsoid yereferensi, ukukunika ingcamango, njengokuba i-WGS84 ikwinqanaba lolwandle kunye nenye iDatum efana ne-NAD 24 yadlula i-3,000 yeemitha ngaphezulu, ipropati ingaba yinto efanayo kwaye ngexesha elinye i-latitude kunye nobude. efanayo, kodwa imigama eqikelelweyo kwezi spheroids zimbini ezahlukeneyo azifani. Kungenxa yoko le nto inkqubo ye-UTM ihlala ibizwa ngokuba "yiprojekthi".
Ukwenza oko kwi-ArcGIS, cofa ekunene kumaleko onomdla kwi-georeferencing kwaye ukhethe ukhetho "lweepropathi", emva koko kwiphaneli evelayo, khetha ithebhu "yomthombo".
Kukho, kukho iqhosha lokukhetha "umthombo", emva koko ungena kwaye uya kukhangela inkqubo eqikelelweyo (UTM), emva koko ukhethe ummandla ohambelanayo kwaye ukuba usenyakatho okanye kumzantsi we-hemisphere.
Ngale fayili yakho i-georeferenced kwi-datum kunye nommandla ochaphazelekayo.
ukuyeka i-alcala uthi:
molo, mna ndivuyisane l blog encomeka ujongana I tego Ngokuqinisekileyo ndiya kuba ifayile DXF shp CAD yam ifayili georeferenced yaye ngenene kwi-GIS, leyo ngokungalindelekanga ukusetyenziswa ArcGIS 9.3 kum kuvela uququzelelo kodwa angaziwa ndiyazi ukuba ndiya kubeka i oyi ingcaciso kwaye oko, kodwa hayi mna gustari ndiyazi le yaque've wakhangela kuyo yonke indawo kwi web kodwa ayikwazi kufumana impendulo aza kakhulu kwakho nako ukuphendula umbuzo wam nceda ezi utm cordenadas ne-gsw84
“”” Jose maria uthe: Matshi 16, 2010 – 8:36 pm
indlela yokudlula umzobo kwi-cad kwi-arc gis okanye kwi-arc view"
ukuhlonipha: ukusuka kumgama we-autocad elandelwayo ukuthumela izinto, iipolgoni (ukudala iimbululwazi) kunye namaphuzu.
ukusombulula iingxaki yeempazamo topological e Cad kukho erramients ezininzi ezifana AutoCAD ukuzoba imephu clenup uncedo isiphene iifayile CAD phambi kumazwe okanye ukusetyenziswa, njengokuba kunxulumene iimilo objectsdata okanye zikhabane. nayo e ArcGIS kunye nezinye GIS software njengoko OpenJUMP zikhona validators topological kwimeko yam sebenzisa ezimbini ukuba encuenta xa ArcGIS kubalulekile Isisombululo UX (ukunyamezelana) kunye q ukuba kuxhomekeke umgangatho umaleko, kunye OpenJUMP unokukhangela yeepoligoni kunye nemingxuma okanye imiqobo kumgama omncinci ofunekayo ngeengcongolo ezincinane.
Ukususela kwi-ArcGIS uyayiphatha njengoluhlu, uze uyibuyisele kwi-Featureclass
jose maria uthi:
indlela yokudlula umzobo kwi cad kwi-arc okanye kwi-arc
Ivan Barria uthi:
Ndiyabona ukuba uthetha ngobuchule be "CADISTA".
Izinto zokuqala eziye zaziwa: zombini i-software i-orinetaciones.El eyahlukileyo iyazi indlela yokusebenzisa enye okanye enye into eyenziwa ngumsebenzisi. Asihlose ukusebenzisa isicwangciso sendlu (i-CAD) kwi-GIS ukuba kum isofthiwe ye-ANALYSIS engaphezulu kweyodwa eneemephu ezimnandi (kuba le mapublisher okanye corel njll).
Ukuphunyezwa kweengcamango ze-topology kwinqanaba le-GIS kwiminyaka ye-arcinfo kubonakala kum isisombululo esihle kwisisombululo sesiphosiso sengqondo. Ukususela kwiArc / Info Info, i-esri inezo zibhathini othetha ngazo:
-inkinobho ezenza ukudala (imigca, i-arcs, iindidi, iipollines, amaphuzu ...) Ngaphandle kokuba uthethe ngezinto ongaziyo:
-ibhonkco ukuhlela (ukufana, ikopi, ukuhamba, ukujikeleza, ukwandisa ...) Leyo injalo ngaphandle kokuba ubhekisele kwenye into.
-Ulawulo olukhawulezayo olusebenzayo…. “Imigca ekumgama we-10 m mayihlangane….” Loo nto? “ukuba banqumle apho bahlangana khona”…Oko? "mayinwebe i-arc inqumle enye"...? Njani kwiCAD ke?
Kwelinye icala, iminqweno yokudityaniswa kwesoftware iyahambelana nomsebenzi wabasebenzisi, umzekelo ndibiza umanyano olukhulu phakathi kwe-ARCGIS Splus okanye iMatlab umzekelo ...
Ndicinga ukuba cosntruccion yeprojekthi GIS, itshathi kwemali kakhulu yam: contruccion CAD kumda wesangqa-based, ledatha alphanumerical e ArcGIS, ukwakhiwa kunye nocazululo umfanekiso in ERDAS (ngokuchasene ucinga ukuba imifanekiso CAD kuphela inkxaso yangemvelaphi kwaye akukho idatha kunye nolwazi kwi-GIS) kunye nomzekelo kwi-ARCGIS.
Njengoko i-ARCGIS (ukusuka kwi-ARC / i-Info, i-UNIX ubuncinane) ilawula ukuxhaswa kabini kwiinkcukacha ze-vectors, bekungekho nto ingxaki yokulahlekelwa ngokuchanekileyo. Ngoko i-SOLOo engenakho ukuba iCAD ikwazi ukuyilungisa iimpazamo ze-TOPOLOGICAL kunye nomanyano we-GIS / CAD uya kuba yinkwenkwe.
Nangona kunjalo, konke oku kungokwesoftware ukusukela kwi-liveware, iiCADISTS kuyakufuneka zifunde ukuphatha iiprojekthi zazo NGOKUQHELEKILEYO (imilambo ekwelinye icala kunye nezitalato kwenye) ndiyakucaphukela ukufumana ulwazi lweCAD ngeepoligoni ezingekhoyo, imigca ngaphandle kokuqhubekeka ngokobuso (umzobo kuphela), neengqameko ezimele imilambo kumaleko amele izitrato….
Bentley: izicelo Mobile kunye nabasebenzisi-kungekhona DGN-